120+ Hupenyu Makotesheni e2020 - Quotes Pedia
128 makotesheni uye kutaura
Vanhu vazhinji vanoramba vachiverenga huwandu hwemakore avanorarama, asi izvo hazvifanire kunge zvakadaro. Izvo zvakakosha kuti ita chokwadi chekuti unorarama makore iwayo uye uve nechokwadi chekuti kune hupenyu hwakakwana mumakore ese aunorarama.
Dzimwe nguva, tinopupurira nguva zhinji nekusimuka muhupenyu hwedu zvekuti tinomira kuona iro rakajeka rezvinhu izvozvo. Ehe, zvinhu hazvigone kuitika zvichienderana nechishuwo chako nguva dzose, asi haufanirwe kurega izvo zvakaipa zvisina kunaka zvichiparadza hunhu mukati mako.
Panga paine nguva dzaungasangana nekukundikana asi izvo zvakare zvakanaka nekuti nguva dzakaipa dzinozivikanwa kukupa iwe dzakanakisa zvidzidzo zvehupenyu hwako. Muchiitiko ichi, zvakakosha kuti iwe upfuure ne hupenyu makotesheni sezvavanokubatsira iwe kuti uwanezve icho chakanaka vibe mukati mako.
Idzo vibes dzinobatsira mukubhadharisa kumusoro zvakare kuitira kuti iwe ugosimudzwa zvakare uye wozoita zvese izvo iwe zvakanangidzirwa kuti uite.
Hupenyu hahuzoendi zvakafanana nguva dzese. Muhupenyu, iwe ungasangana zvinoverengeka zviitiko zvisiri kuitika sekuda kwako. Nekudaro, izvo zvakanaka uye iwe unofanirwa kugadzirisa zvinhu nenzira yako.
Zvese hazvingaitike mukuda kwako, asi iwe haungazove nesarudzo nenguva dzinoverengeka. Zvakanaka kuti upfuure nezvose zviitiko zvehupenyu nekuti ivo vanokupa zvidzidzo zvehupenyu hwako. Chiitiko chako muhupenyu zvinoenderana nemabatiro aunoita matambudziko anounza nzira yako.
Kana iwe wakangwara zvakakwana, haunganamati pazvinhu izvo zvisina basa zvakanyanya muhupenyu hwako. Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kugara uchitenda kuunganidza zviitiko zvako kubva kuzviitiko zvehupenyu uye wozoisa izvo kudzidza mune rako ramangwana.
Nguva dzakaipa dzinokupa iwe zvidzidzo zvakanaka zvehupenyu hwako, uye zvakanyanyisa zvekuti iwe unowana zvakanyanya zvehupenyu hwako zvidzidzo kubva kune izvo zviitiko. Izvi hupenyu makotesheni ichagara ichikubatsira iwe kudzosa iyo yekurudziro iyo iwe yaunogona kurasikirwa iwe uchifamba kuburikidza nematambudziko ehupenyu hwako.
Ehe, iwo akakosha kuti ave nechokwadi chekuti iwe unozadzwa nesimba kamwe zvakare. Zvakare, ivo vanokugadzirira kuti ugadzirire kuitira kuti iwe ugone kusangana nezvinetso zvese zvichiri kuuya munzira yako.
Mukupedzisira, haasati ari makore muhupenyu hwako ayo anoverengeka. Ndihwo hupenyu mumakore ako. - Abraham Lincoln
Tinoverenga makore edu nemakore, handizvo here? Wakambofunga here kuti ndiyo nzira chaiyo…
Murume anoda zvinonetsa muhupenyu nekuti zvakafanira kuti unakirwe nebudiriro. - APJ Abdul Kalam
Isu, vanhu vane tsika yekutorwa nemufaro. Kana mufaro ukagara kwenguva yakakwana,…
Hupenyu hunotanga kumagumo enzvimbo yako yekunyaradza. - Neale Donald Walsch
Tese zvedu tine zviroto uye zvinangwa muhupenyu. Asi kazhinji inosungwa nezvatinoona…
Pfungwa yakanaka kune zvese ichakupa hupenyu hunofadza. - Asingazivikanwe
Tariro inoita kuti tirambe tichienda. Zvinotipa simba rekutarisira kumberi kunyangwe munguva dzekutambudzika. Mu…
Kunyanya iwe kurumbidza nekupemberera hupenyu hwako, zvakanyanya kune izvo muhupenyu kupemberera. - Oprah Winfrey
Hupenyu chikomborero kwatiri tese. Rwendo runoshamisa rune mugove waro…
Rarama hupenyu hwako uye kanganwa zera rako. - Jean Paul
Kana iwe uchida kurarama hupenyu hwako uchifara, usafunge nezvezera rako. Unofanira kufunga…
Kana uchinyora nyaya yehupenyu hwako, usarega mumwe munhu achibata chinyoreso. - Harley Davidson
Hupenyu hwakakosha. Izvo zvakakosha isu tinoshandisa chero chidimbu chayo. Pakati pekukwira nekudzika, isu…
Ramba uchinyemwerera uye rimwe zuva hupenyu huchaneta nekukugumbura. - Asingazivikanwe
Sezvatiri kutsika-tsika kuburikidza nehupenyu, hazvidzivirirwe kuti tichasangana nezvakanaka pamwe neyakaipa nguva…
Pasina mvura, hapana chinokura, dzidza kumbundikira madutu ehupenyu hwako. - Asingazivikanwe
Inoti kukundikana chikamu chakakosha chehupenyu hwedu nekuti zvinongotiumba isu ku…
Kwese kwaunodyara hupenyu, tumbuka nenyasha. - Chirevo chekare cheFrance
Hupenyu hwamangwana hwakanonoka. Rarama nhasi. - Marcus Valerius Martialis
Usambomira kudzidza, nekuti hupenyu haumire kudzidzisa. - Hazvizivikanwe
Mudzidzisi mukurusa waunogona kuva naye hupenyu hwako! Ruzivo runogona kuuya kubva chero kupi uye kwese kwese. Wedu…
Nguva yako ishoma, saka usatambise kurarama hupenyu hweumwe munhu. - Steve Jobs
Nguva yako ishoma, saka usatambise kurarama hupenyu hweumwe munhu. Usabatwe nedzidziso -…
Hupenyu hausi hwekuzviwana iwe. Hupenyu ndewe kuzvisika iwe. - George Bernard Shaw
Sevanhu, takakomborerwa zvikuru nematarenda akasiyana siyana. Tese tine chimwe chinhu chakakosha nezvedu ...
Ida hupenyu hwaunorarama. Rarama hupenyu hwaunoda. - Bob Marley
Hupenyu chikomborero uye isu tinofanirwa kuonga nekuda kwayo mumineti yega inopfuura. Inotivhura…
Sarudzo dzakaomarara, hupenyu hwakareruka. Sarudzo dziri nyore, hupenyu hwakaoma. - Jerzy Gregorek
Sarudzo dzakaomarara, hupenyu hwakareruka! Hongu, dzimwe nguva, ungatofanira kuita sarudzo dzakaomarara muhupenyu hwako, asi…
Pane rudo pane hupenyu. - Mahatma Gandhi
Hauwani hupenyu hunofadza. Unozvigadzira. - Camilla Eyring Kimball
Mufaro chimwe chinhu chaunowana mune zvidiki zvinhu. Uye kuti uwane mufaro, iwe…
Nguva dzakaoma dzinotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha. - Hazvizivikanwe
Pane dzimwe nguva muhupenyu hwedu patinonzwa takaora moyo; tinonzwa takaderera. Pane nguva mune yedu…
Chinja maitiro ako uye anozochinja hupenyu hwako. - Hazvizivikanwe
Hafu yezvikonzero zvako zvekutadza imhaka yemafungiro ako kuhupenyu hwako. Unofanira kuchinja…
Hunhu hukuru hunova zuva rakakura rinova mwedzi wakanaka unova gore rakakura rinova hupenyu hukuru. - Mandy Hale
Kukurudzira chimiro chakakura kunotora nguva nesimba. Mamiriro akasiyana muhupenyu anotisika nenzira dzakasiyana achitiita isu takasarudzika…
Hupenyu hunova hwakanaka kana iwe ukadzidza kuve wakanaka kune iwe pachako sezvauri kune vamwe. - Asingazivikanwe
Kuzvida pachako chinhu chakakosha asi isu tinowanzo chisisira pakati pekuchengetedza hukama hwakasiyana…
Chinangwa changu muhupenyu hakusi kungopona chete, asi kuti ubudirire. - Maya Angelou
Zvakanaka, vazhinji vedu tinosarudza kurarama chiitiko chakasarudzika. Tinofunga kuti kurarama hupenyu hune runyararo…
Kana iwe ukatarisa pane zvaunazvo muhupenyu, unogara uine zvakawanda. - Oprah Winfrey
Hupenyu ndiyo yakanakisa mudzidzisi yauchazowana. Hapana chimwe kunze kwehupenyu chinokudzidzisa zvakanyanya…
Hazvisi izvo zvatinazvo muhupenyu hwedu, asi uyo watinaye muhupenyu hwedu anoverengera. - JM Laurence
Kana uchienzanisa hupenyu hwako nezvinhu zvaunazvo nevanhu vaunogovana navo -…
Iva nesimba uye kunyemwerera pahupenyu, kunyangwe zvichirwadza dzimwe nguva. - Hazvizivikanwe
Kuva anoshinga uye akasimba muhupenyu ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekurarama. Kana usiri…
Usarega zvawakapfuura zvichiuraya ramangwana rako. - Hazvizivikanwe
Tese tine zvedu nyaya dzehupenyu. Pane basa rakaoma rakawanda rakatora kuti uve…